ကွန်ပြူတာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် Kingsoft PC Doctor | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ကွန်ပြူတာအတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် Kingsoft PC Doctor Software...လေးတင်ပေးလိုက်တယ်...!အရမ်းကောင်းတယ် သုံးကြည့်ပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 15.36 MB ရှိတယ်...!ကွန်ပြူတာမှာ အင်တာနက်သုံးရတာ အရမ်းလေးနေရင် ဒီကောင်းလေးနဲ့ SCAN...ဖတ်ပေးလိုက်ပါ...! အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်...!ကိုလိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုလည်းရွေးပြီးတော့ Scan ဖတ်လို့ရတယ်...!သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...!
Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "ကွန်ပြူတာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် Kingsoft PC Doctor"